Goodvibes - အင်တာနက်မှအသံများကိုနားထောင်ရန်ကောင်းမွန်သော application Linux မှ
အသုံးပြုသူလိုချင်သည်မှာသေချာသည် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းမှလောင်ကျွမ်းသည် (ကြည့်ပါ၊ နားထောင်ပါ)နေပါစေဘယ်လိုအမျိုးအစားမျိုး operating system ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ လွတ်လပ်ခြင်းရှိပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော web browser ကိုဖွင့်ပြီးသင်ရွေးချယ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် desktop application များဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် web browser ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးသော CPU, RAM နှင့် Bandwidth။ ပြီးတော့လက်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲကတစ်ခုကတစ်ခုပါ ချစ်တယ်လွယ်ကူသော application တစ်ခုဖြစ်သည် GNU / Linux များ အင်တာနက်မှအသံဖိုင်များလွှင့်ထုတ်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ရုံမှအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အသံလွှင့်ရုံနှင့်အသံလွှင့်ချက်အနေဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းမှတဆင့်အလွယ်တကူနားထောင်နိုင်သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာမကြာသေးမီကလည်းကျွန်ုပ်တို့အခြားတစ်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောလျှောက်လွှာ ဆက်စပ်မှု အသံနှင့် Podcast တခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုခေါ် အသံ Recorder, ထိုအခြိနျတှငျသငျသညျမတတ်နိုင်လျှင်သင်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်အောက်ကအောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်:
"အသံဖမ်းစက်ကcomputer ကွန်ပျူတာ၌အသံ (အသံ) များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစီအစဉ်။ ဤကိရိယာသည်အသုံးပြုသူကိုမိုက်ကရိုဖုန်း၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာ၊ အသံကဒ်များအပြင်မာလ်တီမီဒီယာပလေယာများသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများကဲ့သို့သောကိရိယာများမှအသံဖိုင်များကိုအခြားသူများအကြားမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။".
1 Goodvibes: အင်တာနက်ရေဒီယိုဖွင့်စက်
1.1 Goodvibes ဆိုတာဘာလဲ
"Goodvibes သည် GNU / Linux အတွက်ပေါ့ပါးသောအင်တာနက်ရေဒီယိုဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘူတာများကိုသိမ်းထားရုံဖြင့်သိမ်းနိုင်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံများကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မျှမရှိပါ။ အသံစီးကြောင်း၏ URL ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်သိသည်၊ အသုံးပြုရန်မလွယ်ကူသော်လည်း၎င်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ".
လောလောဆယ်, ထို နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း ရရှိနိုင်ပါ အရေအတွက်အား 0.6, အသုံးပြု။ စုစည်းဘို့ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော gitသင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကဖော်ပြသကဲ့သို့ installation အပိုင်း။ ၎င်းသည်အများစု၏ repositories မှတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distrosငါ့ထံမှငါ့အမှုဖြစ်သကဲ့သို့ Distro MX Linux, ရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်းတန်ဖိုးထား ဗားရှင်းနံပါတ် 0.4.2.
အဲ့ဒီလိုပဲငါကအောက်ပါရိုးရှင်းတဲ့ command နဲ့အတူ install လုပ်ထားတယ် - «sudo apt install goodvibes»။ သို့သော်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်၎င်း၏တရားဝင်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် GitLab y GitHub.
အပေါ်ကပုံကိုချက်ချင်းတွေ့နိုင်သလိုပင်မ interface သည်အနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသည်။ ၎င်းတွင်ထိပ်ပိုင်းဘားနှစ်ခုရှိပြီးကဏ္ sections ၂ ခုရှိသည်။
ဘူတာရုံထည့်ပါဖြေ - အွန်လိုင်းအသံအရင်းအမြစ်ရဲ့အမည်နဲ့ URI (ကွန်ရက်လိပ်စာ) ကိုထည့်သွင်းဖို့၊ ၊ streaming တခုခု (သို့) တည်ငြိမ်နေတယ် (သို့) dynamic audio ဖိုင်တခုခုဖြစ်ဖြစ်၊
ဦးစားပေးဖြေ - Misc, Display and Controls လို့ခေါ်တဲ့ရွေးချယ်စရာ ၃ ခုပါတဲ့ပြတင်းပေါက်တခုကိုပြသဖို့၊ D-Bus နဲ့မျိုးပွားမှုနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ graphical interface နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစီမံခြင်း၊ ကီးဘုတ်ပေါ် Hoykeys ။
ပိတ် GUIအလုပ်လုပ်တဲ့ audio stream ကိုမပိတ်ဘဲ application graphical interface ကိုပိတ်ဖို့ (ဖုံးကွယ်ဖို့) ။
အွန်လိုင်းအကူအညီGitLab မှာတရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ရန်အသုံးပြုသူများသည်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မည်။
အကွောငျးဖြေ - ချက်ချင်းအပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့သတင်းအချက်အလက် ၀ င်းဒိုးကိုပြသဖို့။
ထဲမှာ preferences ၀ င်းဒိုးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစီမံနိုင်သည်။
မာလ်တီမီဒီယာသော့ချက်အထောက်အပံ့: သော့များ , နှင့် ကြောင်းအများဆုံးကီးဘုတ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
အသိပေးချက်များ - သီချင်းပြောင်းလဲသည့်အခါပေါ်လာသည့်အချက်အလက်များ။
ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမရှိသောရွေးစရာ - ရေဒီယိုဖွင့်နေစဉ်စနစ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်။
Autoplay function: လျှောက်လွှာစတင်သောအခါနောက်ဆုံးရေဒီယိုကိုစဖွင့်ရန်။
MPRIS2 အထောက်အပံ့ - ခေတ်မီစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုရရှိရန်။
အပြင်, သူ့ တီထွင်သူ အောက်ပါတို့ကိုမှတ်ချက်ပေးပါ -
"အဓိကအားဖြင့် terminal တစ်ခုတွင်နေထိုင်ပြီး graphical user interfaces များကိုရှောင်ရှားသောသူများအတွက်၊ သင်သည် GUV မပါဘဲ Goodvibes ကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းကိုပေးထားသော command line client မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။".
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများအပြားကြိုးစားခဲ့သည် အွန်လိုင်းရေဒီယိုနှင့်အားလုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အများဆုံးကြိုက်တာကတော့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းပဲ Podcast URL များ ငါသက်သေအဖြစ်ရွေးချယ်ကြပြီ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ် URI သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် URL စားသုံးရန် dynamic သို့မဟုတ်ငြိမ်အသံစီး တစ်ဦး အသံလွှင့်ဌာနသို့မဟုတ် Podcast တခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်ဒီတော့ လှည့်ကွက် (hack က) ငါ URI (သို့) URL တိုက်ရိုက်မရတဲ့အခါမှာငါသုံးခဲ့တဲ့
"ကျွန်ုပ်သည် Video DownloadHelper ကဲ့သို့သောဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်ပလပ်အင်ကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်တက်ကြွသောသို့မဟုတ်ငြိမ်သောအသံစီးကြောင်းပါသောအသံဖိုင်ကိုစတင် download လုပ်ပြီးနောက်၎င်း၏ download link ကိုကူးယူပြီး download ကိုရပ်ပါ။ URI တွင်လည်းထပ်တူထည့်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Podcasts နှင့် Goodvibes မှရေဒီယိုအချို့ကိုနားထောင်နိုင်သည်".
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Goodvibes»၎င်းသည် GNU / Linux အတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေဒီယိုမှလွှင့်တင်ထားသော podcast အဖြစ်အွန်လိုင်းမှအသံများကိုအလွယ်တကူနားထောင်နိုင်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Goodvibes - အင်တာနက်မှအသံများကိုနားထောင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ
ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများတန်ဖိုးထားကြသည်။ အင်တာနက်ရေဒီယိုကိုနားထောင်ဖို့အတွက်၊ အရင်းအမြစ်တွေသိပ်မသုံးတဲ့အလွန်ပေါ့ပါးတဲ့ Pyradio application ကိုငါသုံးခဲ့တယ်။ သို့သော်အချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်၎င်းကို MX Linux တွင်ထည့်သွင်းရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ထူးဆန်း, ငါ Debian Buster အပေါ်အခြေခံပြီးလည်း BunsenLabs ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပေ။
Linux အတွက် RansomEXX မူကွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်